बंगलादेशको महोत्सवमा नेपालबाट ‘नौगेडी’ - SamacharpatiSamacharpati
बंगलादेशको महोत्सवमा नेपालबाट ‘नौगेडी’
प्रकाशित मिति: 2075 असोज 16 मंगलबार(October 2, 2018) 3:18 PM बजे Posted By: Samacharpati
लमजुङ, १६ असोज l बंगलादेशमा हुने इन्टरनेसनल थिएटर फेस्टिभल (अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव) मा नेपाली नाटक ‘नौगेडी’ मञ्चन हुने भएको छ ।
भूमिज थिएटरको आयोजनामा अक्टोबर ९ देखि १४ सम्म बंगलादेशको पञ्चगढमा हुने नाटक महोत्सवमा नेपाली नाटक ‘नौगेडी’ प्रस्तुत हुन लागेको हो । नेपाली नाटकको प्रतिनिधित्व गर्दै आदि इत्यादिको ब्यानरमा ‘नोगेडी’ मञ्चन हुनेछ । आदि इत्यादिका अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक डा. अशोक थापाका अनुसार असोज २६ गते तदनुसार अक्टोबर १२ तारिखमा नाटक मञ्चन हुने समय तालिका आयोजकले दिएको छ । नाटकको लेखन तथा निर्देशन पुरु लम्सालले गरेका छन् । उनका अनुसार नाटक मञ्चनका लागि सवै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजकले जनाए अनुसार महोत्सवमा नेपालसंगै भारत, बंगलादेश, भुटान लगायत विभिन्न देशका नाटक मञ्चन हुनेछन् ।
केही महिनाअघि भारतको कोलकातामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा सहभागि बंगलादेशका टीमको सिफारिसमा नेपाली नाट्य समूहलाई बंगलादेशमा हुने अन्तराष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा निमन्त्रणा गरिएको डा. थापाले बताए । उनका अनुसार गत फागुनमा कोलकातामा आयोजित महोत्सवमा आदि इत्यादि र मञ्जरी नाट्य समूह लमजुङले पुरु लम्सालकै लेखन तथा निर्देशनमा बनेको नाटक ‘पानीघट्ट’ मञ्चन गरेका थिए । ‘कोलकातामा नेपाली नाटक औधी रुचाइयो । त्यहा“का नेपालीले मात्रै नभएर नाटकमा सहभागिले समेत रुचाए । त्यसपछि हामी हौसियौं’ उनले भने, ‘पानीघट्टबाट प्रभावित बंगलादेशी टोलीले हाम्रो नाम सिफारिस महोत्सवका लागि सिफारिस गरेछ । आयोजकले हामीलाई पानीघट्ट अथवा त्यस्तै सांस्कृतिक नाटक लिएर महोत्सवमा सहभागी हुन आग्रह गर्यो ।
नया“ नाटक नै गरौं भनेर नौगेडीको तयारीमा लाग्यौं ।’ ‘पानीघट्ट’ नेपालका आधादर्जन बढी ठाउ“मा मञ्चन भइसकेको उनले बताए । उक्त नाटक नेपालमा प्रदर्शनपछि कोलकता लगिएको र त्यसपछि पनि पुनः नेपालका सहरमा प्रस्तुत गरिएको मञ्जरी नाट्य समूह लमजुङका अध्यक्ष केदार बोहोराले बताए । निर्देशक लम्सालका अनुसार ‘नौगेडी’ पहिलोपटक बंगलादेशमा प्रदर्शन हुदैछ ।
त्यसपछि स्वदेशमा पनि मञ्चन गराइने उनले बताए । निर्देशक लम्सालका अनुसार ‘नौगेडी’ नुवाकोटको प्रशिद्ध दुप्चेश्वर जात्रा र घ्याङफेदीको परिवेशमा रचिएको नाटक हो । यसले विद्यमान छुवाछुत र चेलीबेटी बेचबिखनको समस्यालाई उजागर गर्न खोजिएको उनले बताए । नौगेडीमा सुशीलसिंह ठकुरी, पवित्रा खड्का, जयराम तिमल्सिना, रीता थापा, आइपी आचार्य, मञ्जु गिरी, अनन्तप्रकाश श्रेष्ठ, बिमला अधिकारी देवकोटा, निर्मला खड्का, जेबी डिसी, भीष्म जोशी, केदार बोहोरा लगायतले अभिनय गरेका छन् ।
मेशबाबू र अनिताको “मोयाकै नाम प्यारो” गीत
गायिका पुर्णिमा लामाको आवाजमा ‘चोखो माया’ (भिडियो
गल्फर शुक्रबहादुर ‘धरान वर्ष खेलाडी
पर्वतमा उद्यमीको खोजी
बाजुराको डोगडीमा छाउपडी कायमै
भाग्य न्यौपाने किन गए भिम बहादुरलाई भेट्न्..सबैले हेर्नुहोला Bhagya Neupane, Bhim Bahadur BK
काठमाडौको एउटा कोठामा हेर्नुहोस.. कसैलाई नपरोस् यस्तो Bhagya Neupane Help Video
बाबु जन्मी सकेपछी भित्रै देखी बच्चा नबनाउने २ र ४ महिना खेलाउने अनी फ्याकी दिने नियत रहेछ सुभद्रा पौडेलको हृदयविदारक भिडियो
चौतर्फी चर्चा बटुल्दै सिर्जु अधिकारि र कृष्ण रेउलेको "रेलीमै" हेर्नुहोस भिडियो
स्याङजामा सवारी दुर्घटना
७० वर्ष माथिका ७० जना अग्रज कम्युनिष्ट योद्धाहरु सम्मानित